Lalao sy tononkalo - aingam-panahy avy amin'ny lalao
Lalao sy tononkalo
Nahazo aingam-panahy tamin'ny lalao
Podcast amin'ny lalao sy tononkalo
foibe mpanao gazety
Toggle ny submenu
AC / DC mivantana: Rock Band FAHAIZANA
Akoho Alfred Lalao sy tononkalo
Ny fanekena Adventure
Mpamosavy! Lalao sy tononkalo
Déjà vu 2 Lalao sy tononkalo
Inona no atao hoe fananana? Fandaharana lalao
Paradisa Lalao sy tononkalo
Posted on 15. May 2022 14. Febroary 2022 By Claudia Wendt	Tsy asian-teny mankany amin'ny The Varsav Game Studios
Varsav Game Studios dia studio naorina tamin'ny taona 2016 misy mpiasa 40. Manampahaizana manokana amin'ny famolavolana lalao amin'ny fomba fijery hafa izy io - mifantoka amin'ny mekanika miavaka sy ireo mpilalao fototra tsy manam-paharoa. Ny famokarana voalohany an'ny studio, Bee Simulator, dia navoaka niaraka tamin'ny 14 Novambra 2019 ho an'ny PC, PlayStation 4, Xbox One ary Nintendo Switch…
Hamaky bebe kokoa "The Varsav Game Studios" »
Posted on 15. May 2022 By Claudia Wendt	Tsy asian-teny mankany amin'ny Memories Retold
Ny Memories Retold dia mametraka ny tantara tamin'ny Ady Lehibe I, izay nifarana tamin'ny 11 Novambra 1918. Ny lalao dia fitalahoana ho an'ny fandriampahalemana. Fahatsiarovana Notantaraina Miaramila vitsivitsy miezaka mampifalifaly ny tenany amin'ny mozika. Nisy nitendry gitara ary nandihy ilay bandy karana tao amin’ilay orinasa vao hitanao. Toa...
Hamaky bebe kokoa “Notantaraina indray ny fahatsiarovana” »
Hard West 2: Famoahana 2022
Posted on 15. May 2022 15. May 2022 By Josefina Meloney	Tsy asian-teny mankany Hard West 2: Famoahana 2022
Wild West mihaona horohoro. Ao amin'ny lalao milalao Hard West 2, dia maro ny aventures sy ny mpanohitra miandry anao, izay tsy olombelona foana. Ato amin'ity lahatsoratra ity, dia hilaza aminao izay andrasana amin'ny tohiny. Ianao no mandray ny andraikitry ny jiolahy Gin Carter, jiolahy mampidi-doza sy malaza. Rehefa fantatr'i Gin fa misy lamasinina matoatoa mitondra...
Hamaky bebe kokoa "Hard West 2: Famoahana 2022" »
Lalao sy tononkalo, Vaovao
Posted on 14. May 2022 14. Febroary 2022 By Claudia Wendt	Tsy asian-teny mankany amin'ny Giants Uprising
Ny Giants Uprising dia mamela anao handositra ny fahababoana toy ny goavambe. Varsav Game Studios dia tonga niaraka tamin'ny fampisehoana hetsika. Valifaty amin'ny olombelona Ny tanjonao amin'ny maha-lehibe anao dia ny valifaty amin'ny olombelona. Nanandevo ny goavambe izy ireo ary amin'ny maha-lehibe anao dia mahazo valifaty ianao. Manitsakitsaka sy manorotoro ary manorotoro ireo madinika mandositra ianao. Mandrava ianao...
Hamaky bebe kokoa "Fitsanganana goavana" »
Posted on 13. May 2022 By Claudia Wendt	Tsy asian-teny mankany amin'ny The Whispered World
The World Whispered est un merveilleux jeu de conte de fées du développeur Daedalic.
Hamaky bebe kokoa "Ny Tontolo Nibitsibitsika" »
Navoaka tamin'ny voalohany 2019-04-26 14:19:04.
Base Loaded 4
Posted on 13. May 2022 11. Febroary 2022 By Claudia Wendt	Tsy asian-teny mankany amin'ny Base Loaded 4
Bases Loaded 4 dia tsy inona fa fampiharana fanatsarana ny ampahany fahatelo. Nivoaka tamin’io taona io ihany koa ny ampahany fahatelo. Ny lalao dia ny voninahitra satroboninahitra ho an'ny lalao Bases Loaded izay nivoaka ho an'ny NES ary misy fanatsarana maromaro. Baseball fahefatra - Bases Loaded 4 Bases Loaded 4 no…
Hamaky bebe kokoa "Bases Loaded 4" »
Miara-miasa amin'ny Profiler Memory
Posted on 13. May 2022 By Claudia Wendt	Tsy asian-teny miasa miaraka amin'ny Memory Profiler
Ny Memory Profiler dia fonosana vaovao ho an'ny Unity 2018.3 na aoriana izay ahafahanao mamakafaka ny fampiasana fitadidiana tetikasa iray hahitanao ny fitadidiana sy ny fizarazarana. Ny fitadidiana dia mety hitranga rehefa atokana ny fitadidiana fa tsy avela hampiasaina intsony rehefa tsy ilaina intsony ny fitadidiana. Amin'ity lesona ity dia hianatra ny fomba ...
Hamaky bebe kokoa "Miasa miaraka amin'ny Memory Profiler" »
Fiverenana mandrakizay – Black Survival
Posted on 13. May 2022 13. May 2022 By Claudia Wendt	Tsy asian-teny mankany amin'ny fiverenana mandrakizay - Black Survival
Fiverenana Mandrakizay: Black Survival dia lalao royale ady misy fiantraikany MOBA mahery. Izy io dia miorina amin'ny lalao teo aloha Immortal Soul: Black Survival nataon'ny developer Nimble Neuron. Namana taloha ao amin'ny Fiverenana Mandrakizay Ny lalao dia mampiasa ireo tarehin-tsoratra, entana ary toerana novolavolaina ho an'ny MOBA ambony ambany miaraka amin'ny fahaiza-manao sy antontan'isa fanampiny. Manampy izany koa ny mode duo sy squad...
Hamaky bebe kokoa “Fiverenana mandrakizay – Black Survival” »
Posted on 12. May 2022 13. May 2022 By Claudia Wendt	Tsy asian-teny ho any Epopeia Games
Epopeia Games dia studio breziliana lalao izay efa nanao fandaharana lalao nanomboka tamin'ny 2010. Anisan'ny lalaon'izy ireo ny Mega Monster Party. Lalao Epopeia Games Gaucho and the Grassland Outland Rapture IIN Mega Monster Party Goroons Mandehana any amin'ny tranokalan'ny mpamorona
Wallace sy Gromit
Posted on 12. May 2022 13. May 2022 By Claudia Wendt	Tsy asian-teny mankany Wallace sy Gromit
Amin'ity lahatsoratra ity dia manome topimaso momba ny lalao Wallace sy Gromit aho. Wallace sy Gromit Wallace sy Gromit no mpandray anjara amin'ny andian-tantara an-tsary an'i Nick Park mitovy anarana. Namokatra azy ireo niaraka tamin'ny orinasany Aardman Animations izy. Ny tarehimarika dia nalaina avy amin'ny Plasitlin tamin'ny rafitra mihodina. Ny sarimiaina dia natao tamin'ny fampiasana ny teknika fijanonana antsoina hoe claymation. Wallace…
Hamaky bebe kokoa "Wallace sy Gromit" »
Mpampiasa omaly: 107
Powered by Kaonterin'ny mpitsidika WPS
Toerana filalaovana aroso (5)
Lalao sy tononkalo (1.335)
Lalao kilalao (4)
Very Lalao Corner (2)
lalao mozika (1)
Tantara vaovao (4)
Zavatra miafina (4)
lalao developer (60)
Fandaharana lalao (97)
Vita ny déactivation! Ny fitsidihanao amin'ity tranokala ity dia tsy ho voarakitry ny famakafakana tranonkala intsony. Mariho fa ny cookie deactivation Matomo an'ity tranokala ity dia ho voafafa ihany koa raha esorinao ny cookies voatahiry ao amin'ny navigateur. Ho fanampin'izay, raha mampiasa solosaina na mpitety tranonkala hafa ianao, dia mila mandeha amin'ny fomba fisintonana indray.
Azonao atao ny manakana ny hetsika ataonao eto tsy hodinihina sy ampifandraisina. Hiaro ny fiainanao manokana izany, fa hanakana ny tompony tsy hianatra amin'ny zavatra ataonao sy hanatsara ny fampiasanao ho anao sy ny mpampiasa hafa.
Ny fitsidihanao an'ity tranokala ity dia voarakitra ao amin'ny famakafakana tranonkala Matomo. Esory ity boaty ity raha hisafidy. Ny fitsidihanao ity tranokala ity dia tsy voarakitra ao amin'ny famakafakana tranonkala Matomo amin'izao fotoana izao. Ampidiro ity boaty fisavana ity mba hisafidianana.
Mitaky cookies activated ny asa fanilihana fanaraha-maso.
Ianao ve mitady lalao?
Action Adventure Capcom Daedalic Fialamboly Daedalic toko 13 Devcom 2020 Very Lalao Corner Mialà sasatra Gamescom 2019 Gamescom 2020 Gamescom 2021 GB GBA GBC Haemimont Games Lalao Haiku horohoro Hanketo & Hihazakazaka Kalypso Media Mega Man N64 nds nes Nintendo ds Nintendo Switch PC PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PSP rareware Lalao racing RPG sega shooter SNES paikady Switch Unity Tantara vaovao Xbox Xbox One
TextMesh Pro 14 hevitra
Jiro sy aloka 2D ao amin'ny firaisana 13 hevitra
Inona no atao hoe Sprite Renderer? 12 hevitra
Varsav Game Studios 10 hevitra
Ace Combat Advance 9 hevitra
Hard West 2: Famoahana 2022 8 hevitra
White Owls Inc. 8 hevitra
Fandosirana: fitsangatsanganana an-dalambe 7 hevitra
Tomb Raider Legend 7 hevitra
Heave ho 7 hevitra
Enga anie 2022 (36)
Aprily 2022 (77)
Febroary 2022 (71)
Janoary 2022 (71)
Desambra 2021 (60)
Novambra 2021 (63)
Oktobra 2021 (65)
Septambra 2021 (65)
Aogositra 2021 (88)
Jolay 2021 (28)
Enga anie 2021 (48)
Aprily 2021 (42)
Febroary 2021 (82)
Janoary 2021 (56)
Desambra 2020 (56)
Novambra 2020 (56)
Oktobra 2020 (56)
Septambra 2020 (59)
Aogositra 2020 (64)
Jolay 2020 (52)
Enga anie 2020 (60)
Aprily 2020 (60)
Borderlands Lalao sy tononkalo
Jiro sy aloka 2D ao amin'ny firaisana Fandaharana lalao
James Bond - 007 - Tsy ampy izao tontolo izao Action
Ilay mpiambina Lalao sy tononkalo
Syndrome vahiny Lalao sy tononkalo
Ireo mpivahiny 3 Lalao sy tononkalo
Làlana Rage 4 Lalao sy tononkalo
Copyright © 2022 Lalao sy tononkalo.
Powered by PressBook News Dark lohahevitra
Mampiasa cookies ity tranonkala ity hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa. Azonao vonoina eto ireo cookies ireo.
Mampiasa cookies ity tranonkala ity mba hanatsarana ny traikefanao. Isika dia mihevitra fa mahavita azy ianao, saingy afaka misafidy raha tianao. Fikirana cookieMANAIKY / MANAIKY
Fikirana manokana momba ny fiainana manokana sy ny cookie
Fampahalalana momba ny topy maso cookies / fiainana manokana
Mampiasa cookies ity tranokala ity hanatsarana ny fiasa sy ny traikefan'ny mpampiasa. Misy karazany roa ny cookies: Ny ilaina dia voatahiry ao amin'ny navigateur ary manan-danja amin'ny fampandehanana tsara ny tranokala. Ny cookies tsy ilaina na antoko fahatelo ampiasaina dia ampiasaina amin'ny famakafakana ary asehoy anay ny fampiasana ity tranokala ity. Ireo cookies ireo dia voatahiry ao amin'ny navigateur ihany koa, fa raha avelanao mazava. Amin'ity manaraka ity dia manana safidy ianao handrara ireo cookies avy amin'ny antoko fahatelo ireo. Mety hisy fiantraikany amin'ny fihetsiky ny vohikala ny famonoana ireo cookies ireo.
AWSALBCORS 7 andro Ity cookie ity dia tantanin'ny Amazon Web Services ary ampiasaina amin'ny fampifandanjana entana.
client_id 10 taona Ity cookie ity dia ampiasaina handefasana fampahalalana momba ny fanamarinana.
cookielawinfo-boaty-doka 1 taona Napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent, ity cookie ity dia ampiasaina handrakitra ny faneken'ny mpampiasa ny cookies ao amin'ny sokajy "Doka".
cookielawinfo-checkbox-analytics 1 taona Napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent, ity cookie ity dia ampiasaina handrakitra ny faneken'ny mpampiasa ny cookies ao amin'ny sokajy "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional 1 taona Ny cookie dia napetraky ny GDPR Cookie Consent plugin mba hanoratana ny faneken'ny mpampiasa ny cookies ao amin'ny sokajy "Functional".
cookielawinfo-checkbox-ilaina 1 taona Napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent, ity cookie ity dia ampiasaina handrakitra ny faneken'ny mpampiasa ny cookies ao amin'ny sokajy "Ilaina".
cookielawinfo-checkbox-tsy ilaina 1 taona Napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent, ity cookie ity dia ampiasaina handrakitra ny faneken'ny mpampiasa ny cookies ao amin'ny sokajy "Tsy ilaina".
cookielawinfo-checkbox-hafa 1 taona Napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent, ity cookie ity dia ampiasaina hitahiry ny faneken'ny mpampiasa ho an'ny cookies ao amin'ny sokajy "Hafa".
cookielawinfo-checkbox-fampisehoana 1 taona Napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent, ity cookie ity dia ampiasaina hitahiry ny faneken'ny mpampiasa ho an'ny cookies ao amin'ny sokajy "Fampisehoana".
CookieLawInfoConsent 1 taona Mirakitra ny toetry ny bokotra default amin'ny sokajy mifanaraka amin'izany & ny satan'ny CCPA. Miara-miasa amin'ny cookie voalohany ihany izy io.
ezCMPCCS 1 taona Ezoic dia mametraka ity cookie ity hanaraha-maso rehefa misy mpampiasa manaiky ny antontan'isa cookies.
Ny cookies rehetra izay tsy ilaina mivantana amin'ny tranokala dia miasa araka ny tokony ho izy ary ampiasaina hanangonana angon-drakitra mpampiasa manokana amin'ny alàlan'ny famakafakana, dokam-barotra, na votoaty hafa tafiditra dia antsoina hoe cookies tsy ilaina. Tena ilaina ny mahazo ny faneken'ny mpampiasa alohan'ny hampiasana ireo cookies ireo. Raha tsy omena ny fanekena ny fampiasana cookies, dia tsy ho ampiasaina izy ireo ary ny cookies ilaina ihany no ho mavitrika.
__qca 1 taona 26 andro Ny cookie __qca dia mifandray amin'ny Quantcast. Ity angona tsy mitonona anarana ity dia manampy anay hahatakatra bebe kokoa ny filan'ny mpampiasa sy hampifanaraka ny tranokala mifanaraka amin'izany.
euds fivoriana Ity cookie ity dia napetraky ny Rocket Fuel ho an'ny dokam-barotra kendrena mba hampisehoana ireo dokambarotra mifandraika amin'izany.
i 10 taona Ity cookie ity dia napetraky ny OpenX mba hanoratana angon-drakitra mpampiasa tsy mitonona anarana, toy ny adiresy IP, toerana ara-jeografika, tranokala notsidihina, doka notsindrian'ny mpampiasa sns, ho an'ny dokam-barotra mifandraika.
HERE 1 taona 24 andro Ny cookies Google DoubleClick IDE dia ampiasaina hitahirizana fampahalalana momba ny fampiasan'ny mpampiasa ny tranokala hanehoana azy ireo doka mifandraika ary arak'ilay mombamomba ny mpampiasa.
mc 1 taona 1 volana Quantserve dia mametraka ny cookie mc hanara-maso tsy mitonona anarana ny fihetsiky ny mpampiasa amin'ny tranokala.
rud 1 taona 24 andro Ny cookie rud dia an'ny Rocketfuel ary manoratra ny angon-drakitra mpampiasa, toy ny adiresy IP, toerana, sns. Mba hanamafisana ny fampisehoana doka.
ruds fivoriana Ity cookie ity dia an'ny Rocketfuel ary manangona angon-drakitra mpampiasa tsy mitonona anarana mba hikendry mpihaino sy hanaterana doka manokana.
test_cookie 15 minitra Ny test_cookie dia napetraky ny doubleleclick.net ary ampiasaina hamaritana raha toa ka manohana cookies ny mpitsikilo mpampiasa.
VISITOR_INFO1_LIVE 5 volana 27 andro Cookie napetrak'i YouTube handrefesana ny bandwidth izay mamaritra raha toa ka mahazo ilay interface interface vaovao na taloha ny mpampiasa.
YSC fivoriana Ny cookie YSC dia napetraky ny Youtube ary ampiasaina hanarahana ny fomba fijerin'ny horonantsary tafiditra ao anaty pejy Youtube.
yt-remote-mifandray-fitaovana na oviana na oviana YouTube dia mametraka ity cookie ity hitahiry ny safidin'ny horonan-tsary ampiasain'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny horonan-tsary YouTube tafiditra.
yt-lavitra-fitaovana-id na oviana na oviana YouTube dia mametraka ity cookie ity hitahiry ny safidin'ny horonan-tsary ampiasain'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny horonan-tsary YouTube tafiditra.
yt.innertube::nextId na oviana na oviana Ity cookie ity, napetraky ny YouTube, dia misoratra anarana tokana hitehirizana angona momba izay horonan-tsary avy amin'ny YouTube hitan'ny mpampiasa.
yt.innertube::fangatahana na oviana na oviana Ity cookie ity, napetraky ny YouTube, dia misoratra anarana tokana hitehirizana angona momba izay horonan-tsary avy amin'ny YouTube hitan'ny mpampiasa.
Ny cookies miasa dia ampiasaina mba ahafahan'ny fiasa sasany toy ny fizarana vaovao amin'ny sehatra media sosialy, fanangonana hevitra ary fiasa hafa an'ny antoko fahatelo.
__cf_bm 30 minitra Ity cookie ity, napetrak'i Cloudflare, dia ampiasaina hanohanana Cloudflare Bot Management.
pll_language 1 taona Ny cookie pll _language dia ampiasain'i Polylang hahatsiarovana ny fiteny nofidian'ny mpampiasa rehefa miverina amin'ny tranokala, ary koa hahazoana ny fampahafantarana momba ny fiteny rehefa tsy misy amin'ny fomba hafa.
famakafakana ny zava-bita
Ny cookies analyse performance dia ampiasaina hamakafaka sy hahatakatra ireo lafiny manan-danja amin'ny fampisehoana. Izany dia manampy amin'ny fanatsarana hatrany ny tranokala ary noho izany dia manolotra traikefa mpampiasa tsara ho an'ny mpitsidika.
AWSALB 7 andro AWSALB dia cookie mpandrindra entana mavesatra napetraky ny Amazon Web Services mba hametahana ny fotoam-pivoriana mankany amin'ny tanjona.
ezds 7 taona Ny cookie ezds dia napetraky ny mpamatsy Ezoic, ary ampiasaina amin'ny fitehirizana ny haben'ny piksel amin'ny navigateur mpampiasa, mba hanamafisana ny traikefan'ny mpampiasa sy hiantohana ny votoatiny.
ezoab_1034 2 ora Ezoic dia mampiasa an'ity cookie ity mba hanazarana fitsapana sy fiasa samihafa.
ezohw 7 taona Ny cookie ezohw dia napetraky ny mpamatsy Ezoic, ary ampiasaina amin'ny fitehirizana ny haben'ny pixel amin'ny navigateur mpampiasa, mba hanamafisana ny traikefan'ny mpampiasa sy hiantohana ny votoatiny mifanaraka.
ymex 1 taona Yandex dia mametraka ity cookie ity hanangonana vaovao momba ny fihetsiky ny mpampiasa ao amin'ny tranokala. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina amin'ny famakafakana ny tranokala sy ny fanatsarana ny tranokala.
yuidss 1 taona Yandex dia mitahiry an'io cookie io ao amin'ny navigateur mpampiasa mba hamantarana ny mpitsidika.
Ny cookies analytical dia ampiasaina hamantarana ny fomba fifandraisan'ny mpitsidika amin'ity tranokala ity. Ireo cookies ireo dia manampy amin'ny fahazoana vaovao momba ny isan'ny mpitsidika, ny tahan'ny bounce (isan'ny mpitsidika mitsidika tranonkala iray ary miala avy hatrany), ny firenena niavian'ny mpitsidika, sns.
__gady 1 taona 24 andro Ny cookie __gads, napetrak'i Google, dia voatahiry ao amin'ny sehatra DoubleClick ary manara-maso ny isan'ny mpampiasa mahita doka, mandrefy ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra ary manao kajy ny vola miditra aminy. Ity cookie ity dia tsy azo vakiana afa-tsy amin'ny sehatra nametrahana azy ary tsy hanara-maso angon-drakitra na inona na inona rehefa mitety tranokala hafa.
_gu 1 volana Ity cookie ity dia napetraky ny mpamatsy Getsitecontrol. Ity cookie ity dia ampiasaina hanavahana ireo mpampiasa.
_ym_d 1 taona Yandex dia mametraka ity cookie ity hitahiry ny datin'ny fotoam-pivoriana voalohany amin'ireo mpampiasa.
_ym_isad 20 ora Yandex dia mametraka ity cookie ity mba hamaritana raha misy mpitsidika manana fanakanana doka.
_ym_uid 1 taona Yandex dia mametraka ity cookie ity mba hamantarana ireo mpampiasa tranonkala.
Consent 2 taona YouTube dia mametraka ity cookie ity amin'ny alàlan'ny horonan-tsary youtube tafiditra ary manoratra angona statistika tsy fantatra anarana.
EU 1 taona 24 andro Ity cookie ity dia an'ny Rocketfuel ary manangona angon-drakitra mpampiasa tsy mitonona anarana mba hikendry mpihaino sy hanaterana doka manokana.
ezepvv 1 andro Ity cookie ity dia napetraky ny mpamatsy Ezoic hanara-maso izay pejy nojeren'ny mpampiasa.
ezoadgid_1034 30 minitra Ezoic dia mampiasa ity cookie ity mba hanoratana id ho an'ny sokajin-taona sy lahy sy vavy.
ezoref_1034 2 ora Ezoic dia mampiasa ity cookie ity hitahirizana ny sehatra manondro, izany hoe ny tranokalan'ny mpampiasa, talohan'ny nahatongavany tao amin'ny tranokala ankehitriny.
ezouspva fivoriana Ny cookie ezouspva dia napetraky ny mpamatsy Ezoic ary ampiasaina hanaraha-maso ny isan'ny pejy notsidihin'ny mpampiasa iray.
ezouspvv fivoriana Ny cookie ezouspvv dia napetraky ny mpamatsy Ezoic ary ampiasaina hanaraha-maso ny isan'ny pejy notsidihin'ny mpampiasa iray.
UserID1 3 volana Ity cookie ity dia napetraky ny ADITION Technologies AG, ho ID tokana sy tsy fantatra anarana ho an'ny mpitsidika ny tranokala, hamantarana ireo mpampiasa tsy manam-paharoa amin'ny fotoam-pivoriana maro.
yabs-sid fivoriana Yandex dia mametraka ity cookie ity hitahiry ny ID session.
yandexuid 1 taona Yandex dia mametraka ity cookie ity mba hamantarana ireo mpampiasa tranonkala.
Ny cookies amin'ny dokam-barotra dia ampiasaina hanehoana amin'ny mpitsidika dokam-barotra sy fanentanana ara-barotra. Ireo cookies ireo dia manara-maso ny mpitsidika rehefa mitsidika tranokala iray izy ireo ary manangona vaovao izay ahafahan'izy ireo manolotra dokam-barotra namboarina.
Ny cookies hafa tsy voasokajy dia ahitana ireo izay nodinihina nefa tsy mbola nomena sokajy.
_auid 1 taona Tsy misy famaritana hita.
active_template::332619 2 andro
appRelease fivoriana Tsy misy famaritana hita.
BACKENDID fivoriana Tsy misy famaritana hita.
dspid 1 taona Tsy misy famaritana hita.
ezoab_332619 2 ora Tsy misy famaritana
ezoadgid_332619 30 minitra Tsy misy famaritana
ezopvc_332619 30 minitra Tsy misy famaritana
ezoref_332619 2 ora Tsy misy famaritana
ezosuibasgeneris-1 1 taona Tsy misy famaritana
ezovid_332619 30 minitra Tsy misy famaritana
ezovuuid_332619 30 minitra Tsy misy famaritana
ezovuuidtime_332619 2 andro Tsy misy famaritana
ezux_lpl_332619 1 taona Tsy misy famaritana
f_001 3 volana Tsy misy famaritana
g_001 1 andro Tsy misy famaritana
gt_auto_switch 1 volana Tsy misy famaritana hita.
lp_332619 30 minitra Tsy misy famaritana
mts_id 9 taona 10 volana 8 andro Tsy misy famaritana hita.
mts_id_last_sync 9 taona 10 volana 8 andro Tsy misy famaritana hita.
pvc_visits 1 taona Ity cookie ity dia noforonin'ny post-views-counter. Ity cookie ity dia ampiasaina hanisa ny isan'ny fitsidihan'ny lahatsoratra iray. Manampy amin'ny fisorohana ny fiverenan'ny hafatra avy amin'ny mpitsidika iray.
srp fivoriana Tsy misy famaritana hita.
Anara-mpampiasa 5 volana 27 andro Tsy misy famaritana
Ilaina ny cookies ilaina mba hiasa tsara ny tranonkala. Ity sokajy ity dia tsy misy afa-tsy cookies izay mamela ny fiasa fototra sy ny fiarovana ny tranokala. Ireto cookies ireto dia tsy mitahiry angona manokana.